Omenala nkwụ nkwụnye akara aka (Oghere gbara gburugburu) 14K - Popular Jewelry
Mpempe Aka Nkwụ Akwụ Ahịa Ndị A Na-ahụ Maka Nkwụ (Rounded Square) 14K
AKWOLKWỌ ​​AH ISR IS B / EGO. Omenala iwu abụghị ndị nkwụghachi ma ọ bụ dị maka ojiji dị nro ọzọ ịzụta.
Description: Ihe mgbaaka mgbaaka ọla edo nwere akụkụ nwere akụkụ anọ gbaa gburugburu. Ihe osise nkwụ siri ike si n'elu pụta, na-achọ mma ahụ.
Ihe (ha): 14K Yellow Gold
Akara Mpempe Akwụkwọ Top): 14.0mm (obosara) x 14.0mm (ogologo)
Ogo oha: 7.50
imecha: Ihe niile nke mgbanaka ahụ (gụnyere imewe nkwụ) ejiri nkecha dị elu (na-egbuke egbuke & na-egosipụta).
* Ọ ga-ewe anyị ụbọchị azụmahịa ụbọchị 5-7 iji gba mgbaaka. Dị ka otu a, biko hapụkwuo ụbọchị azụmaahịa 5-7 maka nhazi.